६० वर्षको उमेरमा वडाध्यक्षकी श्रीमती कक्षा १ मा भर्ना ! - Sankalpa Khabar
६० वर्षको उमेरमा वडाध्यक्षकी श्रीमती कक्षा १ मा भर्ना !
९ असार १५:२५
पर्वत । पढ्नका लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण पर्वतकी एक महिला बनेकी छन् । जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–८ चित्रेकी विष्णु गुरुङ ६० वर्षको उमेरमा विद्यालय जान थालेकी हुन् ।
स्थानीय जनसिद्ध माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १ मा अध्ययनरत गुरुङ साक्षर हुन नसकेकै कारण विभिन्न समस्या भोगेपछि बुढेसकालमै भए पनि पढ्ने रहर पूरा गर्न विद्यालय जान थालेको बताइन् । “त्यो बेला पढ्ने उमेरमा विभिन्न कारणले पढ्न पाइएन, अहिले ढिलो भए पनि पढ्न रमाइलो भइरहेको छ”, उनले भनिन् । उनका श्रीमान् सुकबहादुर गुरुङ मोदी– ८ चित्रेकै वडाध्यक्ष हुन् ।
विष्णु भर्ना भएसँगै विद्यालयमा वातावरण रमाइलो बनेको र अरू साना उमेरका विद्यार्थी पनि सिकाइका लागि उत्प्रेरित भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकनारायण तिमिल्सिनाले बताए ।
पुराना पुस्ताका व्यक्तिले अझै पनि अध्ययनमा चासो देखाउनुले समाजमा पठन संस्कृतिको विकास हुने र त्यसले हरेक विद्यार्थीलाई अध्ययनशील बनाउने उनको भनाइ छ ।
१६ असार १७:११
बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय
१४ असार २०:०८
प्रदेश नं १ मा १८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
१५ असार १२:५२
सांसद्‌ले बाँड्ने बजेट नपाएपछि गण्डकीमा तनाव, बजेटमाथिको छलफल अझै…
१५ असार ११:४२
तिब्बतका १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई शानन शहरमा स्थानान्तरण गरिने
१३ असार १८:२१